‘परियोजनाको तयारी नगरी बजेट दिँदा पूँजीगत खर्च भएन’ - डा. पुष्पराज कँडेल
जनतापाटी शनिबार, माघ २५, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोग १५औँ राष्ट्रिय योजनाको आधारपत्रलाई पूर्णता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ ।
योजना निर्माणको प्रमुख संयन्त्रका रुपमा रहेको आयोगले सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सङ्कल्प पूरा गर्ने गरी केही गेमचेञ्जर परियोजनासमेत अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । आइतबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ । आयोगले गरिरहेका काम तथा भावी योजनाका बारेमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसँग गरेको अन्तरर्वार्ताको सम्पादित अंशः
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’लाई परिभाषित गरेका छौँ । हामीले १५औँ योजना बनाउँदा २५ वर्षे योजना र लक्ष्य पनि बनाएका छौँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेको नेपाली सम्पन्न भएको भन्ने हो । हाम्रो मा सम्भावना छ, मानव संशाधन विकासको । मानव भनेको लक्ष्य र साधन पनि हो, त्यसलाई उजागर गर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यकपर्ने भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्र पनि हो । मानवीय पाटो पनि विकास हुनुपर्छ । न्यायपूर्ण वितरणदेखि सामाजिक क्षेत्रका विषय जे जति छन् ती विषय पनि समेटिएको छ । पूर्वाधारमा सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार नै किन नहोस् ती पूर्वाधार पनि पूर्णरुपमा विकसित भएको स्थिति हुन्छ । नेपालीको आम्दानी विकसित देशको नागरिकले वर्तमान स्थितिमा प्राप्त गरिरहेको आम्दानीको स्तरलाई हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेका छौँ ।
दुईटै हो । त्यसमा समृद्धितर्फ के के र सुखतर्फ के के जोडिन्छ भन्ने छ । समृद्धितर्फको पाटोमा पूर्वाधार विकास रहेको छ । त्यस्तै मानव संशाधनको विकास पनि छ । त्यसमा शिक्षा, सीप विकास, मानिसको उत्पादकत्व वृद्धि आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन, वन कृषिको उत्पादकत्व बढाउने पनि हो । समग्रमा राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने विषयलाई समृद्धिभित्र राखेका छौँ । त्यस्तै सुखतर्फ मानिसको मानसिक अवस्थालाई पनि जोडेका छौँ । खासगरी सामाजिक पाटोलाई हेर्न खोजेको छ । मर्यादित जीवनस्तर, परिस्कृत जीवनस्तर, सुरक्षित र न्यायपूर्ण समाज, पर्यावरण सन्तुलन, लोकतन्त्र, सुशासन, राष्ट्रिय एकता, सम्मान र राष्ट्रिय सुरक्षा गरी लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ । त्यो भयो भने नेपाली समग्रमा सुखी र समृद्ध हुन्छौँ भनेर मौद्रिक मूल्यमा पनि परिभाषित गरेका छौँ । सुखी नेपाली र समृद्ध भएको अवस्थामा आगामी २५ वर्षभित्र नेपालीको कूल आय १२ हजार ५०० डलर हुनेछ । त्यो औसतमा मात्रै नभई वितरणमा समेत न्यायपूर्ण नै हुनेछ ।
म त्यसैमा आउँदैछु । परियोजना तयारी नै नभइकन दिएको छ । बजेट विनियोजन भइसक्यो, योजना तयार छैन । बजेट बनाउने बेलामा पनि समस्या हुँदोरहेछ, धेरै खर्च गर्छु भन्ने तर कार्यान्वयन नहुने । बजेट बनाउने समयमा अर्थ मन्त्रालयल, योजना आयोगले काट्छ, त्यसकारण धेरै हालेर पठाइदिउ भन्ने पनि रहेछ । त्यहीअनुसार बजेट पास हुने अवस्था छ । अनुगमन मूल्याङ्कनको पाटो पनि उस्तै छ । मन्त्रालयका समस्या पनि उस्तै छ, अनुगमन मूल्याङ्कन छैन । ‘स्टिमेट’मा नै कमजोरी भएको देखिन्छ । ठेकेदारको आफ्नै खालको समस्या छ । खरिद ऐनमा नै समस्या छ । न्यूनतम् ‘बिडिङ’मा जाने, सञ्चालन खर्च (मोबिलाइजेशन) रकम दिने पनि छ । मोबिलाइजेशन रकम लिएर ‘टाप’ कस्ने अवस्था पनि छ । ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिने । ठेकेदारमाथि अनुगमन नहुने, कारवाही नहुने अवस्था पनि छ ।
काम नभएको पश्चिम सेती छ । काम नभएको निगगढ हो । सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । केही ढिलो भएको छ, तर रोकिएको भने होइन, बूढीगण्डकीको मुआब्जाको कुरा छ । पहिले बढी हल्ला ग-यौंँ । नेपालीको अपेक्षा भने सरकारी भनेपछि बढी लिऔँ भन्ने हुन्छ । मुआब्जा घोषणा त भयो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाए । पुनरावलोकन समिति पनि बनेको छ । स्थानीयवासीले मुआब्जा लिनका लागि दर्ता पनि भइराखेको छ । प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । रु १३ अर्ब जति मुआब्जाका लागि विनियोजन भएको छ । नौ÷१० अर्ब वितरण पनि होला । अर्को सालबाट कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । निजगढको विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्ला । केहीको आयोजना बनाउनु नै हुन्न भन्ने छ, तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश नं २ को सरकार भने राख्नुपर्छ भन्नेमा नै छ । हामी त्यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्नेमा नै छौ । काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ, भई पनि राखेको छ । तर, लक्ष्यअनुसार भएको छैन ।
म धेरै प्रवृत्तिगत समस्या देख्छु । इच्छा शक्तिमा समस्या देख्दिन । राजनीतिक तहमा छिटो सकौँ भन्ने हुटहुटी छ । नीतिगत समस्या पनि त्यत्ति धेरै छैन । प्रक्रियागत समस्या भने छन् । कार्यान्वयन गर्ने विधि प्रक्रिया छन् नि त्यसमा छ । त्यहीँ कमजोरी भएकाले नै त्यसमा खेल्ने न हो खेल्न चाहनेले । समग्रमा भन्दा हाम्रो राज्यको क्षमता नै कमजोर रहेछ कि क्या हो भन्नेमा म छु । समग्रमा सरकारी, राजनीतिक, कर्मचारी एवं निजी तहको अवस्था छ । गर्न पर्ने काम धेरै छ । स्थानीय तहको समेत गरेर त सात खर्ब जति पूँजीगत खर्च गर्छौं । त्यो पूँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको छ । सरकारसँग भएको नेशनल कन्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (एनसिसिएन) पनि मासिइ नै सक्यौँ । सबै निजी क्षेत्रमा जानुपर्छ ।
कि उपभोक्ता समिति, कि निजी क्षेत्रभन्दा अर्को विकल्प छैन । उपभोक्ता समितिको पनि त्यत्ति राम्रो सन्देश छैन । त्यो पनि भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको छ भन्ने छ । निजी क्षेत्रबाट जानुपर्छ । निजी क्षेत्रका ठेकेदार प्रविधि, निर्माण उपकरण भएका छन् त भन्दा छैन । रहनेछ, देखिएन । संयुक्त उपक्रम (जेभी) गर्ने भनेर विदेशी पनि आउँछन् । नाम राख्ने काम यताका ले नै गर्ने रहेछन् । तर पनि प्राविधिक समस्या रहेछन् भन्ने मैले महसुस गरेको छु । त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ ।
त्यसलाई नियमनका माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार पनि दिने, गलत गर्नेलाई दण्ड पनि दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो राजनीतिक तह, कर्मचारीतन्त्र एवं निजी क्षेत्रमा नै किन नहोस्, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्र नै बलियो र प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । निजी क्षेत्र त नाफाका लागि आएको हो । उसको धर्म नै नाफा गर्ने हो । पाएको ठाउँमा उसले नाफा गर्छ । राजनीतिक क्षेत्र र राष्ट्र सेवक सेवाका लागि आएका हुन् । त्यसकारण यी दुई वटा क्षेत्र बढी व्यवस्थित भएर जानुपर्छ । राष्ट्र सेवकलाई कताकता ‘इन्सेन्टिभ’ नपुगेको हो कि ? अरु देशको तुलनामा त कमजोर नै छ ।
सार्क क्षेत्रमा पनि पारिश्रमिक तह कम नै छ । समग्रमा कर्मचारीतन्त्र यत्रो चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने पनि छ । यत्रो कर्मचारी राख्दा हाम्रो स्रोतले धान्छ कि धान्दैन भन्ने छ । योभन्दा बढी बढाउन पनि मिल्दैन वा सक्दैन । यसलाई ‘राइट साइज’ गरेर इन्सेन्टिभ बढाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । आआफ्ना तहका सरकार पनि छन् । खर्च त्यसै बढेर गएको छ । समग्रमा हेर्दा काम गर्ने निकाय भनेको अगाडि बढाउने कर्मचारी तह नै । वास्तविक कार्यान्वयनमा लैजाने भौतिक पूर्वाधार बनाउने निजी क्षेत्र नै हो । यी दुवैलाई मिलाएर जानुपर्छ ।
नयाँ ढङ्गले सोच अगाडि आएकै छ । परियोजना बैंकको जुन कुरा छ नी, त्यो नै नयाँ हिसाबले आएको हो । अनुमगन मूल्याङ्कनलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भनेर नयाँ ऐन नै बनाएका छौँ । नयाँ ढङ्गले नभएको भने होइन । केन्द्रीय सरकार प्रभावकारी भएन भनेर तीन तहको सरकार बनाएका छौँ । तर अहिले सङ्क्रमणकाल नै सकिएको जस्तो देखिँदैन । कर्मचारीको पूर्णरुपमा ‘ओएनएम’ नै भएको छैन । के कति स्थानमा के कति कर्मचारी चाहिने भन्ने नै निक्र्योल भएको छैन । हामीले एक प्रकारको समायोजन त ग¥र्यौं कर्मचारी ।
समायोजन गर्दा पनि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा आधाजसो कर्मचारी नै छैनन् । केही कर्मचारी केन्द्रमा नै बसेको देखिन्छ । त्यसलाई ‘राइट साइज’ गर्नुपर्ने देखिन्छ । तल पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । सबै विषय मिलिसकेको छैन । हामीले यो पञ्चवर्षीय योजनालाई त आधार वर्षका रुपमा लिने भनेका छौँ । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदर अगाडि बढ्छ भन्ने छ ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि हाम्रो सकारात्मक सन्देश भने नेपाल जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट माथि गयो भन्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि थप सहज बन्छ । हामी पनि विकासशील देश भइसकेका छौँ भन्ने हुन्छ । आफ्नो काम आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । सधैँ मागेर देशको विकास हुँदैन भन्ने हुन्छ । आफ्नै पैसा प्रयोग भएपछि पैसा चलाउनेमाथि अलिक बढी दृष्टि दिने कुरा होला ।
अहिले त कस्तो छ भने दुनियाँलाई कहाँबाट पैसा आएको छ भन्ने पनि थाहा छैन । राज्यले गरेका हरेक काममा के गरिरहेको छ । आफूले तिरेको राजश्व कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने पनि आम जनतामा चासो रहन्छ । दबाबमा परेकाले काम पनि बढी हुन्छ । त्यसकारण यसका सकारात्मक नकारात्मक सबै पाटो हुन्छन् । हामी आशावादी भएर जाने हो ।
हामी आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा लागेका छौँ । हामीले पुस मसान्तमा नै त्यसलाई फाइनल गर्ने तयारी गरेका थियौँ । तर, पुस मसान्तमा केही प्राविधिक समस्या आउँदो रहेछ । नियमित कामले पनि रोकियो । मोटामोटी हामी अन्तिम चरणमा छौँ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले एकपटक प्रस्तुति गर्ने चरणमा छौँ । त्यसपछि पूर्ण आयोगको बैठक बोलाएर पास गर्ने र नजिता खाका तयारीमा छौँ । पाँच वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौँ भनेर सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सूचक मिलान गर्ने काम गरिरहेका छौँ । सङ्घीय सरकारका कतिपय सूचक मिलाउने र बनाउने काम गरिरहेका छौँ । अन्तिम अध्ययन भइरहेको छ । रुपान्तरणकारी योजनाका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा हामी सम्भावित योजना कुनकुन हुन सक्छन् भनेर पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ । सङ्घीय सरकारसँग मात्रै नभई प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारको जड स्थानीय तह मात्रै होइन, सङ्घीय तह र प्रदेश तहसमेत छन् । प्रदेश तहमा त काम त्यत्ति धेरै अगाडि नबढेकाले कुरा बाहिर आएको छैन । सङ्घीय र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको छ । स्थानीय तहलाई प्रशिक्षित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । अलिक अराजकता बढेको छ । अराजकता यस अर्थमा छ कि स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने निकाय पनि छैन । सरकार सबै स्वायत्त सरकार छन् । सङ्घीय तहले भनेको स्थानीय तहले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रदेशले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने छैन । सबै प्रतिस्पर्धामा भएको जस्तो देखिन्छ । समन्वयात्मक सहकार्यतामा आधारित सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता भनेका छौँ । तर पनि त्यसको ठ्याक्कै सेट भइसकेको अवस्था छैन । त्यसकारण स्थानीय तहमा समस्या छन् ।
अख्तियारले पनि देखाएको छ । अध्ययन पनि भएको छ । महालेखा परीक्षकले गरेको लेखापरीक्षणमा अलिकति सङ्घीय तह र प्रदेश तहमा एक÷डेढ प्रतिशत फरक देखिन्छ । त्यसैलाई एकदमै महान् बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । तर स्थानीय तहलाई ठिक बाटोमा लैजानुपर्ने र प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । घर बिग्रियो भने त जिम्मेवारी अभिभावकको हुन्छ । सङ्घीय सरकार अभिभावक हो । अभिभावकले ठिक तरिकाले लिएर जाने सक्यो भने तल बालबच्चा बिग्रन पनि सक्छ । त्यसकारण सङ्घीय सरकारले यस पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामीले आयोगको तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौँ ।
आयोगको आन्तरिक क्रियाशीलतालाई हेर्नु हुन्छ भने त्यो भनाइलाई म अस्वीकार गर्छु । हामी काम बढी गर्ने, प्रचार कम गर्ने पनि गरेका छौँ । हामी काममा नै देखाऔँ भनेर लागेका छौँ । गर्नुपर्ने विषयमा पनि कम प्रचार भयो कि भन्ने लागेको छ । हामीलाई दिइएको कार्यादेश छ । त्यसभित्र हामीले काम गरेका छौँ भन्ने हाम्रो दाबी हो । जुन समयमा यो आयोग बन्यो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले दिएको आदेश के थियो भने तपाईंहरुले समयमै १५औँ योजना तयार पार्नुस् भन्ने थियो । हामी आएको दुई महिनापछि १५औँ योजनाको तयारीमा लाग्यौँ । एक/डेढ वर्ष त्यसमा लाग्यौँ । त्यो योजना मात्रै नभई २५ वर्षे योजना पनि तयार पारेका छौँ । त्यसबाहेक हामीले नियमितरुपमा गर्नुपर्ने काम जेजे छ, त्यो गरिरहेकै छौँ । विशेष गरी दुई वटा काम भने हामीले गर्न सकेका छैनौँ भन्ने लागेको छ– अनुसन्धान र अनुगमन ।
अनुगमन गरिएपनि पर्याप्त भयो भन्ने छैन । समन्वयमा मूलतः चार वटा कार्यादेश दिइएको छ । नीति निर्माणका काममा पर्याप्तरुपमा लागेका छौँ । सातै जना सदस्य, आयोग समग्ररुपमा सर्मपित भएर काममा लागेका छौँ । त्यसकारण आयोग निष्क्रिय भयो यसले काम गरेन भन्ने कुरामा म सहमत छैन । आयोगको भूमिका हिजोको भन्दा केही खुम्चिएको भने छ । विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा थिएन संरचना । माथि मात्रै थियो । यसको काम परियोजना बाँड्ने थियो । धमाधम परियोजना हालिदियो । योजना दिने भनेपछि माननीयको घुइँचो लाग्थ्यो र आयोग केन्द्र थियो । बजेटको आकर्षण थियो ।
अहिले आयोग योजना बाँड्नेमा छैन, अप्रत्यक्ष रुपमा मात्रै संलग्न छ । राष्ट्रिय खालका योजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उठान भएर आएका योजना मात्रै अगाडि बढाएका छौँ । सबै परियोजना दिनेमा हामी छैनौँ । मूल नीति बनाउने, समन्वय गर्ने काम दिइएको हुनाले त्यतातर्फ बढी केन्द्रित भएका छौँ । १५औँ योजना निर्माणको कामले गर्दा नै त्यसमा लाग्नुपर्ने भयो । दोस्रो आदेशमा पनि त्यही नै छ ।
बेलाबेलामा आयोग नै चाहिँदैन भन्ने पनि आउँछ । यो सिद्धान्ततः मिल्दैन । विशेष गरी दुई प्रकारका ‘स्कुल अफ थट’ छ । एउटा विचारमा सबै मार्केट केन्द्रित भएर जानुपर्छ, उसैलाई छाड्नुपर्छ भन्ने छ । ‘अल थिंग्स आर डन बाई माकेर््ट’ भन्ने छ । अर्को सिद्धान्त भनेको राज्य नै विकासमा क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने छ । राज्यले विकासको नेतृत्व गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो विकासशील देशका लागि बजारलाई मात्रै छाडेर विकास अगाडि जाँदैन । त्यो सिद्धान्तमा जाँदाको परिणाम हामीले देखिभोगी सकेका छौँ । हामी द्वन्द्वमा फस्याँै, के के भए । त्यसैले हाम्रा काममा ढिलाइ हुँदै गए । आयोजनाको हालत देखिएकै छ ।
संविधानले हामीलाई भनेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेपछि त्यसले योजना माग्छ नै । तपाईंसँग स्रोत सीमित छ र आवश्यकता अथाह छ भने प्लानिङ जरुरी हुन्छ । विकसित, अल्पविकसित वा समाजवाद उन्मुख देश भनौँ प्लानिङलाई डिस्कार्ड गर्न सक्नुहुन्न । त्यसलाई नकारेर जान सक्नुहुन्न । राज्यले केही गर्न सक्दैन, गर्नुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त बोकेकाले आयोग चाहिँदैन भन्ने देखेको छु मैले । अर्को थरीले नबुझेर भनेको देख्छु । एउटा बुझीबुझी भन्ने अर्को नबुझेर भन्ने अवस्था छ । नबुझेर भन्नेले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानले दिएको कार्यादेश भनेकै समाजवादमुखी भएर जाने भन्ने हो ।
प्रस्तुतः रमेश लम्साल र अशोक घिमिरे (रासस)
ओमिक्रोन भेरियन्टको नयाँ प्रजाति फेला २ मिनेट पहिले
पहिरोमा अझै २० बेपत्ता १४ मिनेट पहिले
साताको दोस्रो कारोबारको दिन सेयर बजारमा गिरावट २४ मिनेट पहिले